Fashion, efana nakho konke okunye kuleli zwe eba Kuvunguza, ngamanye amazwi, konke entsha - ukhohlwe kahle ubudala. Abaklami Umbukiso is kancane kancane ngemva kwalokho abuyela catwalks emhlabeni futhi imifanekiso ecwebezelayo yamakhasi Marlene Dietrich. Marie Antoinette, Monroe ubuhle ebulalayo, njll Uhlu kungaba engapheli.
Wochwepheshe, bezinwele akazange bambalala ngale ndaba. Ngendlela Retro hair style. Ezinjalo njengoba kwekhanda Ketrin Pirs. Eminyakeni 60, lokhu kufakwa bekulokhu ethandwa kakhulu, futhi empeleni wenze kube - elula. Uboya enezinwele ezinde kuzodala ivolumu, futhi uzokwenza izinwele ngokwazo ngempela aluhlaza. Katherine izinwele ezinde, nge umthunzi konsundu, ngakho izinwele bangaziqhayisa ngempela. Esikrinini encane ochungechungeni yena njalo ngokumangalisayo alungise izinwele amahle, hhayi kuphela eyenziwe isitayela yesimanje, kodwa futhi ngendlela okusikhumbuza ezinsukwini ezidlule.
Ikakhulukazi kwekhanda ezithakazelisayo Ketrin Pirs ekuqaleni isizini yesibili, okuyilapho ifilimu isitshela indaba yokuphila kwakhe esikhathini esidlule. Izinwele Heroine a podkrucheny kancane bese siphela. imicu Wavy aluka e pigtails ezimbili okwakuthandelene kusukela emphethweni kusiya ekupheleni obuphelele zinyakaze. Wesaba ukubheka nge kwekhanda enjalo uyisidala - lena silly, ngoba izinwele enempilo futhi eside bekulokhu umhlobiso engcono noma iyiphi intombazane eluke amagoda kanye zezinwele bebelokhu ethandwa njalo njalo. Muva nje, kucelwe ukustaka enjalo ehlobene kakhulu kunanini ngaphambili.
Indlela yokwenza kwekhanda Ketrin Pirs? Ngokuqinisekile eziningi amantombazane ngacabanga ngakho futhi wazama ukwakha into enjengale. Kuwufanele ukusizakala ngomyalo onemininingwane futhi ikhishiwe ngokudala ubuhle ezifana kwekhanda Ketrin Pirs. Kuyadingeka ukulungiselela kusengaphambili ngefaskamu, engabonakali, curling, emakhilayoni, mousse, futhi ngeke ukuvikele ekubuyiseleni uwoyela izinwele.
Ngakho, nakhu ukuthi ukudala kwekhanda Ketrin Pirs:
Uma wageza ikhanda lakhe, kubalulekile ukusebenzisa uwoyela okubuyisela.
Izinwele omiswe akudingekile ukusebenzisa dryer izinwele, kungcono ukuthatha ithawula efudumele futhi ome nabo ngendlela engokwemvelo.
Eceleni Imiphumela umxhwele mousse kufanele usetshenziswe, kuyokunikeza lemali oyifunayo.
KUBUHLUNGU kakhulu Central ukwehlukana izinwele ngesigamu.
pigtails Future okukhulu sokuvalelisa sivala. Lapho uthwebule iqala ukwaluka. Uma he finyelela phakathi ikhanda, entsha Strand aluka akuyona zinkulu. Ukusetshenziswa wax ezidingekayo bushelelezi izinwele ke eluka wesi- (eyodwa, omunye phansi) futhi PUK ne ongabonakali.
Ngakho kudingeka siqhubeke kanye ubude lonke izinwele, futhi ekugcineni ukukhetha Strand emaphakathi futhi kakade ngezansi esiphambanweni futhi uvikelekile emikhawulweni kwamagoda.
Intulo sivala ku curling futhi ikamu iminwe. Ngakho kudalwa umphumela amaza okukhanya unconstrained.
Umnikazi wale ukustaka kungenziwa ngokuthi intokazi imfashini ye Emakhulwini eminyaka adlule, isithombe wadala kuyoba ezikhangayo futhi njengabesifazane. Futhi okubaluleke nakakhulu, ungakhohlwa ukuthi izinwele enempilo futhi uzilungise kukodwa kuyoba umhlobiso omuhle, ubufakazi lokhu - kwekhanda Ketrin Pirs ngesikhathi azenza, okuyinto kabusha iphupho abanikazi eziningi izinwele ezinde.
Izinwele spray ivolumu: Uhlolojikelele, izici zohlelo lokusebenza, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Izindlela eziningana indlela yokwenza izinwele aluka ku kwempunga
Izikhangibavakashi Nikolayev futhi Nikolayev esifundeni
Elokishini ngomnikelo omncane. argasids
Lakhulisiwe lymph node e imbilapho ezingabantu: Ubangela, Ukwelashwa
Rhinorrhea - kuyini? Izimpawu kanye Ukwelashwa
Amazing eyikati Ancistrus: okuqukethwe kule aquarium